ယူကေတွင်အရက်သောက်ခြင်းနှင့်ယူအက်စ်တွင်သောက်ခြင်းအကြားခြားနားချက်များ - သတင်း
အမေရိကန်တွေက Brit ထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ အစားအစာကြော်၊ မျိုးချစ်စိတ်၊ နိုင်ငံရေးဒေါသ။ သို့သော်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားအများစုသည်အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းမှာအရက်သောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကပြောသည့်အတိုင်းလုံးလုံးလျားလျားလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊
သို့တိုင်အမေရိကန်များကဘီယာစင်တာ၊ ပါတီပွဲများနှင့်မှော်သီချင်းများကိုယူဆောင်လာကြသည် အနီရောင်တစ်ကိုယ်တော်ဖလား ဒါကြောင့်သူတို့ကလုံးဝမကောင်းတဲ့မဖြစ်နိုင်ပါ။
ယူကေတွင် - သင်သည်အခြေခံအားဖြင့်သင့်လက်၌ဘီယာဖြင့်မွေးဖွားသည်
၎င်းသည်သင်၏ ၁၀ နှစ်မြောက်မွေးနေ့တွင်သင်၏အဖေက Stella တစ်ခွက်စာကျွေးခြင်းသို့မဟုတ်ရှစ်နှစ်ပြည့်သောအခါတနင်္ဂနွေနေ့လည်စာဖြင့် Bucks Fizz ခွင့်ပြုခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဖြစ်စေ၊ သင် ၁၄ နှစ်အရွယ်တွင်သောကြာနေ့တွင်သင်အများဆုံးသုံးစွဲမည် နှင့်စနေနေ့ညများတွင်ပန်းခြံခုံတန်းရှည်များ၌ WKD များအားသော့ခတ်ပြီးသင့်မိခင်၏အကြိုက်ဆုံးမုန့်ကော်ဇောတွင်သင့်မိဘ၏အရက်ကက်ဘိနက်ပါဝင်မှုကိုအားနည်းစေနိုင်သည်။
ယူအက်စ်တွင် - ဆယ်ကျော်သက်သောက်ကြူးခြင်းသည်အလွန်ဆိုးရွားသော်လည်း၊
အခမဲ့ပြည်မှာ, လောင်းကြေးအများကြီးပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည်။ ရဲရင့်စွာဖမ်းဆီးကောင်းခန့်ထားနိုင်သည်။
သူတို့မလုပ်လျှင်သူတို့သည်သင့်ထံမှ shit ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးသင် Nickolai ကိုသင်နှင့်အတူထုတ်ဆောင်ရန်ဘယ်တော့မှမကြိုးစားပါစေနှင့်ဟုဆုတောင်းစေပါလိမ့်မည်။
ယူကေတွင် - သင်၏ UNIVERSITY သည်သင်၏ MOUTH သို့မူးယစ်ဆေးများသွန်းလောင်းခြင်းထက်အခြားအရာအားလုံးကိုပေးဆပ်ရန်၊
၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသောဗြိတိန်ကျောင်းသားများအတွက်သင် uni ကိုပထမဆုံးတွေ့ကြုံခံစားသည်မှာလတ်ဆတ်သူဖြစ်သည်။ ယူနီဖောင်းများသည်စကတ်များကိုငှား။ မြို့တွင်းသို့အ ၀ တ်အစားများ ၀ ယ်ရန်သင့်အားဘတ်စ်ကားစီးသည်။
တစ်ညမှာသူကကျောင်းဝတ်စုံ၊ နောက်တစ်ခုလိုလိုဂူတွေပေါ့။ အချိုရည်များအရောင်းအ ၀ ယ်သည်သင်၏ uni အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းလုပ်ငန်း၏အခြားမည်သည့်အချိန်၌မဆိုပိုမိုကောင်းမွန်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတော်မူမည်။
ယူအက်စ်တွင် - သင်သည်ကောလိပ်တက်နေသည့်အချိန်ကာလ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းစင်တီမီတာကိုပြေးသူတစ် ဦး ကဲ့သို့ခံစားရလိမ့်မည်။
မင်းအသက် ၂၁ နှစ်မပြည့်သေးခင်မှာမင်းတို့ရဲ့စိတ်တွေကဝိညာဉ်တွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးအချိန်ကုန်သက်သာလိမ့်မယ်။ သငျသညျ RAs (သင့်ကို uni သို့စျေးဝယ်မည့်ကျောင်းသားရဲ), uni ရဲတပ်ဖွဲ့ (အမှန်တကယ်သေနတ်များနှင့်အတူအမှန်တကယ်ရဲတပ်ဖွဲ့) နှင့်တော်တော်များများအစဉ်အဆက်အစဉ်အဆက်လိမ့်မည်။
မင်းရဲ့အားကစားကိရိယာထဲမှာသောက်နေတာလား။ အဘယ်သူမျှမကြီးမား။ အရက်နှင့်ပုံဖော်ခံရ? လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ပင်စဉ်းစားမနေပါနဲ့။ ဒါကြောင့်လူတွေက frats နဲ့ဆက်သွယ်ကြတာပေါ့။
သင်တင်နိုင်သည့်ဓာတ်ပုံများကိုပင်လျှင်သင်၏ Insta ကိုကိုယ်တိုင်ဆင်ဆာလုပ်ပါလိမ့်မည်။
ငါ ဗြိတိန်နိုင်ငံ - သောက်ဖို့အတွက်သင့်တော်တဲ့အချိန်ဘယ်တော့မှမရှိဘူး
နာရီဝက်ထက်ပိုကြာတဲ့ခရီးကိုရထားလား သောက်ပါ အဖွားနှင့်အတူခရစ်စမတ်နံနက်? သောက်ပါ သောကြာနေ့နေ့လည်စာအလုပ်မှာလား သောက်ပါ ဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်ကြာသပတေးများမဟုတ်ပါသနည်း။
၎င်းသည်အရက်ဆိုင်မနက်စာနှင့်အရက်သောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပန်းခြံအတွင်းရှိငါးမိနစ်ခန့်နေရောင်ထွက်သောအချိန်တွင်ပန်းခြံအတွင်းရှိ G&T ၏အလွန်သေးငယ်သောပိုင့်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်စေဗြိတိသျှတို့ကနေ့ခင်းဘက်တွင်အရက်သောက်ရန်သောက်ကြသည်။ လူတိုင်းကလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာသင်မကောင်းတဲ့ကြည့်ရှုစေနိုင်သည်မဟုတ်လော
ယူအက်စ်အေတွင် - ရက်သတ္တပတ်များစွာသောက်သုံးရန်အထူးသီးသန့်ထားရှိရန်လိုအပ်သည်။
သို့သော်သင်ဘွဲ့ရသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တစ်နေ့သောက်ခြင်းသည်ရှင်းပြရန် ပို၍ ခက်ခဲလာသည်။ အင်္ဂါနေ့ကအရက်ဆိုင်သည်အရာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်တလတစ်ကြိမ်ရေငတ်သောကြာသပတေးနေ့အတွက်ဘားတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယူကေတွင် - အရက်ယမကာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အအေးမိခြင်းနှင့်အဖျော်ယမကာဂိမ်းများသည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်သည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကပူဖောင်းအချို့ကိုယူဆောင်လာပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကအိမ်တွင်းဆေးလိပ်သောက်တတ်သည်။ ယောက်ျားလေးများသည် FIFA အရက်သောက်ဂိမ်းကိုတိတ်တဆိတ်ကစားနေစဉ်မိန်းကလေးများသည်အခြားအခန်းတစ်ခန်းတွင်အတူတကွပြောင်းလဲနေချိန်တွင်သင်ဟာအရက်မူးနေသောဝက်တစ်ဝိုက်တွင်ထိုင်နေရုံသာဖြစ်သည်။
ကြိုတင်သောက်စရာများ၌အချို့သောအကြွင်းမဲ့ keeno သည် Ring of Fire ကိုကစားရန်အကြံပြုလိမ့်မည်။ သူတို့ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့စစ်သွေးကြွဖြစ်လိမ့်မည်, သင်ဂျော့ခ်ျ Foreman ထံမှ fag Butts, နေမကောင်းနှင့်အမဲဆီ၏ခြစ်နှင့်ပြည့်စုံတစ် shit ရောနှောချရှိခြင်းတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ယောက်ယောက်က Never Have I Ever ကိုအကြံပေးသကဲ့သို့မင်းသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေလိမ့်မည်။
ယူအက်စ်အေရှိ: ကြိုတင် -GAME သည်ရန်လိုခြင်းနှင့်သောက်စားခြင်းဂိမ်းများသည်ဘဝလမ်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်
ယဉ်ကျေးပြီးသင်၏ shitty စူပါမားကတ်ဗော့ဒ်ကာကိုစူပါမားကတ် cola နှင့်ရောနှောခြင်းသို့မဟုတ်ပေါင် ၅ ပေါင်ပုလဲပုလင်းပေါ်တွင်မြှုပ်ခြင်းအစားသင်ရိုက်ချက်များ မှလွဲ၍ မည်မဟုတ်ပါ။ သေနတ်ပစ်ဘောလုံး၊ ဗော့ဒ်ကာရိုက်ချက်များ၊ တက်ကီလာ၏ရိုက်ချက်များ၊ စာသားတစ်စုံတစ်ရာ၏ရိုက်ချက်များ၊ သင်သတိမထားမိသည့်သင်ပူနွေးသောရောနှောခြင်းဖြင့်ဆေးကြောထားသည်။
အဲဒီမှာပိုပြီးအတင်းအကျပ်ပျော်စရာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ Snapchat ပုံပြင်တွေကရှည်လျားပြီးလုံ့လဝီရိယရှိလိမ့်မယ်။ မိန်းကလေးတွေကသူတို့ Facebook မှာရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေသူတို့ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလဲဆိုတာကိုသိဖို့သူတို့ဟာအပြင်းအထန်အပြုံးပုံတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးအချိန်ဖြုန်းနေကြလိမ့်မယ်။
သင်ရိုက်ချက်များကုန်ပြီးသောအခါ၊ သင်အရက်မူးမူးမူးမူးဘီလူးထနေသောအခါ၌၎င်းကိုသင်အတွင်းထဲ၌တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ရရန်နည်းလမ်းတစ်ခုလိုအပ်သည်။ ဘီယာ pong နှင့်လှန်ခွက်ကိုသူတို့ရန်လိုနေသော, ယှဉ်ပြိုင်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာမျှမျှတတညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ဝေးလွန်းတစ်ကိုယ်တော်ခွက်များပါဝင်ပတ်သက်ပေမယ့်ယောက်ျားလေးက fuck ဆိုတဲ့အလုပ်ပါဘူး။
Michael Jackson ရဲ့အိမ်ခြံမြေ၏အသားတင်ရကျိုးနပ်
ယူကေတွင် - သင်လမ်းအတွက်သောက်စရာတစ်ခွက်ယူကောင်းယူလိမ့်မည်
သငျသညျပါတီ, တစ် ဦး အရက်ဆိုင်သို့မဟုတ်ကလပ်သို့သှားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင်ဖြစ်ကောင်းလမ်းများအတွက်သံဗူး၏စုံတွဲတစ်တွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြိုတင်ရောနှောဗော့ဒ်ကာ squash, AKA squadka, AKA ဒစ္စကိုရေလုပ်ကြတာပေါ့။
ဒါပေမယ့်ငါဒုက္ခရလိမ့်မည်မဟုတ်လော အဘယ်သူမျှမ fuck ဆိုတဲ့။ ယူကေတွင်မင်း၏နှလုံးသားထဲရှိအကြောင်းအရာများကိုလမ်းများပေါ်တွင်လှည့်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ တက္ကစီမောင်းသူအများစုသည်သူတို့၏နောက်ကျောဘက်တွင်အရက်ကိုရှူရှိုက်မိပြီးအပြောက်ကိုတားမြစ်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောသိသာသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းသည်ပြွန်ကိုအလွန်ပိတ်ပင်ထားသည် မင်းကမြို့ပြဒဏ္it'sာရီလို့စပြီးစစဉ်းစားနေတယ်။
ယူအက်စ်တွင် - သင်ဖမ်းဆီးနိုင်မည်
အမှန်တရား၊ တရားမျှတမှုနှင့်ဒေါ်လာ ၂၅ ပွင့်လင်းသောကွန်တိန်နာဒဏ်ငွေများအတွက်ရဲရင့်သောရဲအရာရှိများကမင်းရှေ့တံခါးအပြင်ဘက်တွင်ရှိသောဘီယာဘူးတစ်ဘူးဖြင့်ခြံထဲထက်လမ်းလျှောက်ခြင်းကံကောင်းခြင်း။
သင်ဤအရာကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်လျှင်ပင်၊ သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသွားနိုင်သည့်နေရာတွင်ကားမောင်းသွားရလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်သည်ကျော်လွှားသွားနိုင်ပြီးသင်၏မျက်နှာ၌အလွန်တောက်ပသောမီးရှူးတစ်ခုဖြင့်ပြောင်မြောက်လိမ့်မည်။ လိုင်စင်နှင့်မှတ်ပုံတင် Gray သူတို့ရုပ်ရှင်ထဲမှာလိုပဲ။
ယူကေ - သင်၏ကိုယ်ပိုင်သောက်စရာကိုပါတီတစ်ခုသို့ယူဆောင်လာပါ
သိသာထင်ရှားတယ်။ decorum ကဲ့သို့သောအရာရှိတယ်။
Carlsberg လေးလုံးပါသောသို့မဟုတ် Sensebury ၏အိတ်သို့မဟုတ်အိတ်ဖွင့်ထားသော proscco ပုလင်းပါသောအိတ်သည်လုပ်လိမ့်မည်။ ထို့နောက်ပါတီ (ည ၁၁ နာရီခန့်) တွင်သင် ၀ န်ထမ်းမိုင်းရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ပရီမီယံဗော့ဒ်ကာရင်းတစ်ဝက်အပြည့်အ ၀ ထွက်ပေါ်လာမည့်အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ဂျင်ပုလင်း, အဝတ်လျှော်စက်နှင့်ရေခဲသေတ္တာ၏သုပ်အံဆွဲ။
ယူအက်စ်အေ - မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်သိုးကိုယူဆောင်လာဖို့သင်သာရှိသည်
ကောလိပ်ပါတီအများစုမှာရုပ်ရှင်တွေလိုပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ frats အများစုဟာအခွန်တွေအများကြီးပေးပြီးငွေတွေများတဲ့အတွက် kegs တွေ၊ bottရာမအရက်တွေပုလင်းကြီးတွေမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။
ယူကေတွင် - သင်သောက်ခြင်းကိုကိုင်တွယ်နိုင်
10 ပိုင့, ခြောက်လရိုက်ချက်များနှင့် 35cl ဗော့ဒ်ကာနက်ရှိုင်းသည်နှင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ခြေထောက်ပေါ်နေဆဲသိသိသာသာ။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့နေရာက Kopparberg ဖန်ခွက်ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးအနီးအနားမှာရှိတဲ့ချုံပုတ်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့ခင်ဗျားဟာအကြံပေးအဖွဲ့တစ်ခုလို့ပြောလိုက်တယ်။
သင်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူတိုင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံနိုင်တယ်လို့သင်ထင်တယ်၊ သို့တိုင်သင်အမှန်တကယ် uni ၏ပထမ နှစ်မှစ၍ အိပ်ရာပေါ်သို့တင်ထားခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်တစ်ခုခုရှိသေးသည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည် superbad မြင်ကြပြီနှင့်အဖြစ်မှန်တော်တော်လေးဆင်တူသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရက်သောက်ခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အတွေ့အကြုံနောက်ကျလွန်းသောကြောင့်အမေရိကန်များသည်အရက်ကိုသဘာဝအားဖြင့်သည်းခံနိုင်မှုနည်းပါးပြီးယောက်ျားလေးကပြသသည်။
သေချာတာပေါ့၊ မင်းကရောထွေးသောက်မယ့်အစားရိုက်တဲ့ပုံကိုရိုက်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ယူကေမှာထက်ယူအက်စ်မှာလျှပ်စစ်ပြတ်တောက်တာပိုများတယ်။
ယူကေတွင်: PUB သည်သင်၏အသင်းတော်ဖြစ်သည်
၎င်းသည် ၀ တ်စုံဆင်ထားသောပုံစံဖြစ်သည်။ သို့သော်အရက်ဆိုင်သည်ဗြိတိသျှလူမျိုးများအတွက်ဘဝလမ်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်တွင်လုပ်နိုင်သည့်အရာ၊ သောက်သုံးခြင်းတို့သည်ညစ်ပတ်အနီရောင်ကော်ဇောများနှင့်ဟောင်းနွမ်းသောဘားပါသည့်မြူဆွယ်သော Tudor အဆောက်အအုံတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ စျေးပေါစီးကရက်နှင့် piss တူသောအနံ့ယောက်ျား။
သန့်ရှင်းသောအရက်ဆိုင်တွင်စည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကျည်များစနစ်ကိုအသံတိတ်သော်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနားလည်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မည်သည့်ပတ်ပတ်လည်တွင်ရှိကြောင်းနှင့်သင့်လည်ပတ်မှုသည်တက်လာသောအခါသင့် ဦး နှောက်၏ရှေ့မှောက်၌သပ်ရပ်စွာတင်သွင်းသောစနစ်ဖြစ်သည်။ ခဏရဲ့အသိပေးစာမှာတိုင်ပင်။ အကယ်၍ သင်သည်ပတ် ၀ န်းကျင်၏စည်းမျဉ်းများကိုမလိုက်နာပါကသင်သည်ပုလင်းသောက်ထိုက်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်တွေလား သူတို့ဟာJägerbombsဆိုတာဘာလဲမသိဘူး၊ တစ်ဒေါ်လာနဲ့လဲရမယ် တိုင်းတစ်ခုတည်းသောက်။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့
ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့်မတူဘဲအရက်ဆိုင်များသည်အရက်သောက်ခြင်းအတွေ့အကြုံအားလုံးမဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့်ကောလိပ်တွင်ဖြစ်သည်။ သငျသညျအများပြည်သူအတွက်ထက်ပုဂ္ဂလိကအတွက်သောက်အများကြီးပိုအချိန်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်နှင့်ရလဒ်အဖြစ်အများကြီးလျော့နည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာဘားအတွေ့အကြုံသို့ဝင်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ပျမ်းမျှဇွန်းတွေထက်မဲမှောင်မှောင်မှောင်နေပြီးသင်တစ်ယောက်ယောက်က screw-top Bud Light ကိုဖွင့်လိုက်ရင်တောင်မှသင် tip ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ Jukebox သည်အလွန်ကျယ်လောင်လွန်း။ အလွန်လေးနက်သောသီချင်းများနှင့်အတူတူပင်။ ဝမ်းနည်းဖွယ်သီချင်းလေးပုဒ်လေးသည်အဆုံးမဲ့ကွင်းဆက်တွင်သံသရာလည်လိမ့်မည်
ယူကေတွင် - သင်သည်ကလပ်တစ်ခုတွင်တက်နေဖွယ်ရှိသည်
သငျသညျမလိုချင်ကြဘူးရင်တောင်သူကအမှုအရာထုတ်ဝိုင်းရုံလမ်းကိုပါပဲ။ ဘားနောက်ကွယ်မှ VK များနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူညီမှုအချို့ရှိလိမ့်မည်။ DJ သည်မန်ချက်စတာ၊ Bristol နှင့်ဘာမင်ဂမ်တို့မှမည်သူမဆိုအားလက်ကိုလေပေါ်တွင်တင်ပေးရန်ပြောလိမ့်မည်။ သင်တို့ပတ်လည်မည်သူမဆိုချွတ်ပေါ့ပါး။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု - သင်ကလပ်တစ်ခုတွင်အဆုံးမသတ်ရ
ယူအက်စ်တွင်အရက်ဆိုင်များသည်ကလပ်များဖြစ်ပြီးကလပ်များမှာမူများပြားသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမေရိကန်ရှိနိုက်ကလပ်တစ်ခုဟုခေါ်ဆိုရန်၊ ပုလင်းများပေါ်တွင်မီးရှူးမီးပန်းများ၊ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များစတိုင်ကျလှသောဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ အိမ်တွင်းနေကာမျက်မှန်တပ်ထားသူများ၊
ဤအရာကိုပြောပါ။ သူတို့ဟာ Solihull မှကော်ဇောများ၊
ယူကေတွင် - အကယ်၍ သင်ဆွဲယူလိုက်လျှင်၎င်းသည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်
သငျသညျဖြစ်ကောင်း sloppily သူတို့ကိုကလပ်ထဲမှာလည်ပင်းပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆေးလိပ်သောက်areaရိယာ၏ nook အတွက်လေးလံသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရှိလိမ့်မယ်။ မင်းရဲ့ဆံပင်မှာဖျားနာနေပြီးအခန်းပတ်ပတ်လည်မှာစိုစွတ်နေတဲ့အဝတ်တွေနဲ့အတူမင်းရဲ့နာမကိုမမှတ်မိဘဲနောက်တစ်နေ့မနက်မှာနိုးပါလိမ့်မယ်။
၎င်းသည်ကလပ်ထဲတွင်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ၎င်းသည်ငြူစူသောမီးခိုးကိုကျော်နိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်းအတွေ့အကြုံမှာလည်းအတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်သင့်အားပုံမှန်အတိုင်းသင်ထင်မြင်မည့်သူတစ် ဦး၊ စေးကပ်သောကြမ်းပြင်၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်အနံ့များနှင့်သူတို့၏အော့အန်မှုန်အနည်းငယ်ပါဝင်သည်။
တစ်နေရာရာကိုရှာဖွေလျှင်သင်၏အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားသည် PBR သံဗူးများနှင့် Grateful Dead ပိုစတာများဖြင့်မလှုပ်မယှက်ငြိမ်သက်နေသည့်ကောင်လေးတစ်ယောက်အိပ်ခန်းဖြစ်သည်။
ယူကေတွင် - သင်၏အရက်မူးသည့်အစားအစာသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖြစ်လိမ့်မည်
ကြက်ဟင်းခါးသီးခတ်ထားသောစက္ကူသေတ္တာထဲမှသင်၏ကိုယ်ထည်အ ၀ တ်အစားထဲသို့ကျသွားစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ရှလကာရည်တွင်ရေနစ်သေဆုံးသည့်ချစ်ပ်များနှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသောချွေးထွက်သောအမွေးအမွေးများပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
အိုးနှင့်ဟင်းရည်။ အရာအားလုံးကို fuck ဆိုတဲ့အပေါ်ဆွဲချ, သင်နှစ်သက်ပါ။
ယူအက်စ်တွင် - သင်၏အရက်မူးနေသောအစားအစာသည်ထိုမျှအတိုင်းအတာကိုအချို့သောအစားအစာအဖြစ်အပျက်များစွာမှကြိုတင်ကာကွယ်ထားလိမ့်မည်
Mozzarella တုတ်များ၊ ပီဇာ၊ sandရာမအသားညှပ်ပေါင်မုန့်များသည်နံနက် ၃ နာရီခန့်တွင်မနက် ၇ နာရီတွင်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ အမျိုးမျိုးသောအရောင်းအ ၀ ယ်ပမာဏသည်မကျေနပ်သောအစားအစာနေရာတိုင်းသည်တူညီသော playbook စာအုပ်မှဖတ်နေပုံရသည်။
kebabs၊ ဟင်းတွေ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေအကြောင်းမေ့လိုက်ရင်ဒီအစားအစာအားလုံးဟာဒိန်ခဲဖုံးအုပ်ထား၊ ရှေးရှေးတုန်းကပီဇာခေါက်ဆွဲကဲ့သို့သောခေါက်ဆွဲများသည်တကယ့်အရာဖြစ်သည်။
ယူကေတွင် - ည ၈း၈ တွင်အဆုံးသတ်မည်
နေရောင်သည်မျက်မမြင်များမှတစ်ဆင့်စီးဆင်းသွားလိမ့်မည်၊ ကျိုးပဲ့နေသောသံဗူးများသည်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌မျောပါနေလိမ့်မည်။ တစ်စုံတစ် ဦး က ‘ဇွန်းများတွင်အင်္ဂလိပ်စာအပြည့်အဝသွားရန်အကြံပြုထားသည်။
အဘယ်ကြောင့်ကိုယ့်အမှုအရာ meme ပြောကြဘူး
သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာအဲဒါကိုဆူးဝါယာကြိုးနဲ့ပတ်ထားသလိုခံစားရတယ်၊ ပြီးတော့ခင်ဗျားလေးလံတဲ့မီးခိုးရောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအိပ်ရာပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပြီးဒီဟာကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဆိုးရွားလှတဲ့ယခုအချိန်အထိရောက်သွားစေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းအတွက်နောင်တရလိမ့်မယ်။
ယူအက်စ်အေတွင်: ညည ၃ နာရီအချိန်တွင်အဆုံးသတ်မည်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဘားများသည်အစောပိုင်းကပိတ်ထားခဲ့ပုံရပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်သိုလှောင်ရုံသည်အမေရိကန်ကောလိပ်များနှင့်အလွန်ဝေးကွာသည်။ ရာဂဏန်းအကြား shit coke အနည်းငယ်ဂရမ်မျှသာရှိသောကြောင့်ပါတီကိုနံနက်စောစော၏မိုက်မဲသောနာရီများသို့စီးဆင်းစေရန်အတွက်အဆုံးမဲ့မရောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းမရှိပါ။
၀ ယ်ရန်အသက် ၂၁ နှစ်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်တင်းကြပ်သောတားမြစ်ပိတ်ပင်မှုဥပဒေများအရပါတီသည်ပါတီကိုအဆုံးသတ်သောအခါရဲကိုထိန်းချုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်တတ်နိုင်သမျှစောလျင်စွာစတင်သည်။ ကံကောင်းပါစေ။